Sadex-geeslay “The Triquetra” - Land Of Punt
Astaanta sadex-geeslayda looyaqaan Triquetra (three cornered) luuqad ahaan waxay kasoo jeeda latiinka “Latin” waxayna u samaysantahay sadex falaadh oo sadex-geeslay ah qaab kala duwan oo farshaxnimo ku dheehan oo kalena waa lagu muujiya sadex geeslayda. Calaamadan waxaa lagu turjuma inay utaagan tahay sadex quwad/awood oo isku jira kana turjumaya ilaahay oo sadexda ah. Asal ahaan sadex-geeslayda “triquetra” waxay kasoo jeeda oo loo tiriyaa qoomiyada loo yaqaanay seltig “Celtic” ee ku noolan jiray jasiirada Ingiriiska. Markaynu eego tarikhda iyo waxyaabaha ay aminsanaayen waxay ishabehaan baabalooniyankii waxayna labadan qoomiyadood caabudan waxaan jirin iyo khuraafad. Celtiga waxay caabudijireen oo lahaayen ilaahyo badan iyo inay wax kasta u nisbeenjireen dhulka. Waxaa kaloo ku badnaa sixiroolayasha oo meelobadan tarikhda celtiga ayaa ku arkay inay islaan faalisa iyo wax lamid xusijireen.
Astaanta sadex geeslayda “Triquetra” waxaynu kaloo ku haynaa taarikhda wakhti jaahiligii Giriiga Giriiga waa laga yaqaanay astaanta sadex-geeslayda waxaanad ugu tagay filaasoofigii Aristotle qoraaladisa isagoo ka hadlaya cilmiga astaanta sadex gees leh.
Astaantan sadex-geeslayda lala xidhiidhiya wadaada waa weyn ee ku shaqaysta cilmi sirta iyo xidhiidhka Ibliis waana astaan siyaabo badan loo dhigo. Sadex geeslayda oo turjumaad badan leh waxaynu ku koobayna cilmigeeda inay utaagan arinka iyo shaykasta oo laba noqday inay ku dhexjirto ee abuurka Ilaaahay, waxay sumad u tahay labka iyo dhedig, dabka iyo biyaha, diimaha iyo quraafadka taaso ay ku xidhantahay hadba dhinaca loo jeediyo. Waxay kaloo astaan utahay hanka, himilada iyo kacdoon/isbadaldoon lala yimaado sidii uu ulayimi Ibliis ee Ilaahay ugasoo horjeestay intaan dhulka loo soo tuurin.
Astaanta sadex-geeslayda markay kor eegayso waxay utaagn tahay awooda ninka iyo dabka waa lab waana astaan raganimo. Lakinse, hadii ay sadexta gees ay hoos u foororaan waa astaanta dumarka waa dhedig waana biyo. Sanabada dumar ee lacaabudo “godesses” sida kirisna, aphrodite iyo friyya waxay sitaan oo loo nisbeeya sadex geeslay foororta.
astaan ataar qadiimi baybalka sadex geeslay Sadex-geeslay “The Triquetra” ururada hadafka qarsoon leh